Nhau - Shrink firimu kupatsanura
Shrink firimu inoshandiswa mukutengesa uye kutakura maitiro ezvigadzirwa zvakasiyana. Basa rayo guru nderekudzikamisa, kuvhara uye kuchengetedza chigadzirwa. Iyo yekuderera firimu inofanirwa kuve neakakwira puncture kuramba, yakanaka shrinkage uye imwe shrinkage kushushikana. Munguva yekudzikira maitiro, iyo firimu haigone kuburitsa maburi. Sezvo shrink firimu inowanzo shandiswa kunze, zvinodikanwa kuwedzera UV anti-ultraviolet mumiriri. Kusanganisira OPS / PE / PVC / POF / PET yekudzora firimu.
1) Pe kupisa kupisa shrinkable firimu kunoshandiswa zvakanyanya mune yese gungano kuputira waini, magaba, mamineral mvura, dzakasiyana siyana zvinwiwa, machira uye zvimwe zvigadzirwa. Chigadzirwa chine mukana wakanaka wekuchinja, kusagadzikana, kusagadzikana nemisodzi, uye hazvisi nyore kutyora. , Kwete kutya mafungu, hombe shrinkage chiyero;
2) PVC firimu ine hunhu hwepamusoro kujekesa, gloss yakanaka uye yakakwirira shrinkage;
3) POF ine hunhu hwenzvimbo yepamusoro gloss, kuomarara kwakanaka, kukwirira kwemisodzi, yunifomu kupisa shrinkage uye inokodzera otomatiki kumhanya-kumhanya kurongedza. Icho chigadzirwa chinotsiva chetsika PVC kupisa inodzikira firimu. POF zvinoreva kupisa inodzikira firimu. POF inomiririra akawanda-masiraji co-extruded polyolefin kupisa shrinkable firimu. Iyo inoshandisa yakatetepa yakaderera-density polyethylene seyakaganhurirwa yepakati (LLDPE) uye co-polypropylene (pp) sematanda emukati nekunze. Iyo yakaiswa epurasitiki uye kuburitswa kunze kwemuchina, uye wozogadziriswa nemaitiro akasarudzika senge kufa kwekuumba uye firimu bubble inflation.
4) OPS inodzora firimu (inotungamirwa polystyrene) kupisa inodzora firimu irudzi rutsva rwekuputira zvinhu neOPS kupisa inodzikira firimu inosangana nezvinodzivirirwa nharaunda. OPS kupisa inopisa shrinkable firimu ine yakakwira simba, yakakwira kuomarara, yakagadzikana chimiro, uye yakanaka gloss Degree uye pachena. Kugadziriswa kuri nyore, kupenda kuri nyore, kuita kwakanaka kwekudhinda, uye yakanyanya kudhinda resolution. Kune ezviratidzo izvo zvinogara zvichitsvakisisa kudhinda kwakanaka, iko iko iko iko kuvandudzwa kwezvinhu. Nekuda kwekukwirisa uye kusimba kweOPS firimu, inogona kukodzera padhuze nemidziyo yemhando dzakasiyana, saka haigone chete kudhinda mapatani akaenzana, asi zvakare kusangana nekushandiswa kwemidziyo yekurongedza midziyo ine akasiyana maumbirwo.
Iyo isina-chepfu, isina hwema, isina girisi firimu inosangana nehutsanana hwechikafu inobvumidza vagadziri kushandisa mavara anotora maziso kuti vawane 360 ​​° dhizaini dhizaini, ichipa kutamba kuzere mukugadzira uye kufungidzira, kuitira kuti zvinwiwa nezvimwe zvigadzirwa zvive pane chitaridzi Iwo mapatani ari kushandiswa akajeka, simbisa mufananidzo pasherefu, uye unoburitsa isingatarisirwi mugaba mhedzisiro. 5) Hunhu hwePET kupisa-inodzikira polyester firimu: yakagadzikana pane yakasarudzika tembiricha, inodzikira painopisa (pamusoro pegirazi tembiricha tembiricha), uye kupisa kunodzikira kupfuura 70% munzira imwechete.
BodyMuviri wakajeka uye unoratidza mufananidzo wechigadzirwa.
Sunga zvakasunga kurongedza, yakanaka anti-kuparadzira.
③ Kunaya, unyoro, uye humbowo humbowo.
Hakuchina kupora, iine imwe anti-yekunyepedzera basa.
Kupisa shrinkable polyester firimu inowanzo shandiswa mukureruka chikafu, chinwiwa musika, zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvesimbi, kunyanya shrink label ndiyo inonyanya kukosha munda wekushandisa. Nekuti nekukurumidza kukura kwePET mabhodhoro echinwiwa, mabhodhoro ezvinwiwa senge cola, sprite, uye majusi akasiyana siyana anoda kuti PET kupisa kupisa shrinkable firimu kuti iwirirane neyekupisa chisimbiso zvinyorwa Izvo ndezve chikamu che polyester uye zvine hushamwari nharaunda zvinhu zviri nyore kudzokororazve. shandisa. Pamusoro pekushandiswazve semavara ekudzikira, mafirimu epolyester anopisa-pari zvino ave kushandiswawo kurongedza kwekunze kwezvinhu zvezuva nezuva.
Nekuti haigone chete kudzivirira zvakapetwa zvinhu kubva mukuvhunduka, kunaya, hunyoro, uye ngura, asi zvakare inoita kuti chigadzirwa chikunde vashandisi neyakagadzirwa zvakanaka zvakadhindwa ekunze, uye inogona kuratidza zvakanaka mufananidzo wakanaka wemugadziri. Mazuva ano, vagadziri vekuputira vanowedzera vanoshandisa yakaderedzwa shrink firimu kutsiva yechinyakare yakajeka firimu. Nekuti iyo yakadhindwa inodzora firimu inogona kusimudzira kutaridzika kwechigadzirwa, zvinobatsira kushambadzira kwechigadzirwa, uye chiratidzo chechiratidzo chinogona kuva nepfungwa yakadzika mumoyo yevatengi.
Shrink firimu kurongedza muchina musimboti
Kugadziriswa kwekumanikidzika Pazasi panogadzirirwa makasitoma, ayo anogona kusundidzirwa pamadiro, uye kukwirira kunogona kugadziriswa zvinoenderana nesaizi yepakeji.
1. Kutanga gadza nguva yekupisa yemuchina.
2. Mushure mekutsimbirira bhatani kana otomatiki bhatani, iyo rack silinda solenoid vharuvhu inogoneswa uye kuburitswa kusunda giya, uye giya rinotyaira cheni. Panguva ino, iyo yekumberi padyo switch ye rack cylinder yakavharwa. Kana iyo cylinder inomhanyisa kumusoro kwepakafa, kumberi switch yeiyo rack cylinder yakavhurwa, uye vharuvhu yevhosi yevhiri inosimbiswa uye kuburitswa.
3. Kana sirivheri yeovhenji ichimhanyira kunzvimbo yepamusoro yakafa, iyo timer inotanga kunonoka uye iyo rack cylinder solenoid vharuvhu inosimbiswa.
4. Kana nguva yapera, iyo solenoid vharafu yehovhoni humburumbira inopera simba.
5. Zvinoenderana neanoshanda mureza mureza, sarudza kuti uenderere mberi nekushanda kunotevera.
Ruzivo rwakakodzera nezve yekudzora firimu iyo iwe mupepeti waakuudza nhasi iri pano. Ini ndinotenda munhu wese ane nzwisiso yakazara yeiyo kupatsanurwa kwemavhidhiyo ekudzikira uye mashandisiro ekudzora mafirimu mushure mekuverenga rondedzero yemupepeti, handiti? Shrink firimu zvirokwazvo iri nyore kwazvo, nyore kushandisa uye inodhura-yekuchengetedza zvinhu. Rudzi urwu rwekutakura zvinhu haruiti zvakatipoteredza. Izvo zvakanyanya kuomarara kudzokorodza mushure mekushandisa uye chiyero chekushandisa zvakare chakadzikira, saka zvinogona kunzi hazvigone kushandiswazve. Tinotarisira kubuda kwemafirimu ari nani uye akapora zvakatipoteredza mune ramangwana.
Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha, Shrink Firimu Pvc, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Polyolefin Pof Shrink Firimu,